DHEGAYSO-Wasiir Gallan oo Ka Hadlay Dagaalka Sanaag, Booqashadii Af-urur iyo Duqaymaha Maraykanka ee G Bari.
Puntlandnews.net (Boosaaso)-Wasiirka wasaaradda amniga iyo DDR-ta ee dowladda Puntland Cabdisamad Maxamed Gallan ayaa waxa uu ka hadlay xaaladda guud ee ammaanka Puntland, arrimaha gobolka Sanaag, duqaymaha Maraykanka ee gobolka Bari iyo qodobo kale.
Waraysi dheer oo uu bixiyey wasiir Cabdisamad Maxamed Gallan ayaa waxa uu ugu horayn kaga warbixiyey socdaalkii madaxweyne ku-xigeenka Puntland shalay ku gaarey deegaanka Af-urur ee gobolka Bari oo uu sheegay inuu guul ku soo dhammaaday.
Dhinaca kalena, wasiirka amniga Puntland ayaa faahfaahin dheeraad ah ka bixiyey safar uu dhowaan ku tegey gobolka Sanaag, ciidamadii ka soo goostay Somaliland ee ku biiray Puntland iyo sida ay reer Sanaag uga horyimaadeen maamulka Muuse Biixi.
Wasiirka amniga dowladda Puntland oo wax laga waydiiyey ammaanka gobolka Bari ayaa sheegay inuu hadda aad u wanaagsan yahay uuna socdo qorshihii xukuumaddu u dejisey sugidda ammaanka Boosaaso iyo guud ahaan gobolka Bari.
Waxa uu sidoo kale aad ugu dheeraad duqaymaha dowladda Maraykanku ay ka fuliso buuraleeyda gobolka Bari iyo sida ay ciidanka ammaanka Puntland iyo sirdoonku gacanta uga siiyaan beegsiga Alshabaab iyo Daacish.